HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mizo Mooré Myama Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Ouzbek Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA: ILAY ADY NANOVA AN’IZAO TONTOLO IZAO
Tapitra ny Ady Lehibe I ny 11 Novambra 1918. Nakatona ny tsena ary nandihy eran’ny lalana ny olona. Tsy naharitra ela anefa izany satria tonga indray ny loza hafa, izay nandripaka kokoa noho ny basimarovava.
Nisy areti-mandringana atao hoe gripa espaniola namely an’ireo miaramila tany Frantsa, tamin’ny Jona 1918. Nandripaka tokoa io gripa io. Mbola betsaka noho ny matin’ny fahavalo, ohatra, ny miaramila amerikanina matin’izy io tany Frantsa, tao anatin’ny volana vitsivitsy. Nitondra otrikaretina ireo miaramila rehefa nody tany amin’ny taniny, ka vetivety dia niely eran-tany ilay aretina.
Nanjaka koa ny mosary sy ny olana ara-toe-karena, taorian’ny ady. Mosarena ny ankamaroan’ny olona tany Eoropa, rehefa tapitra ny ady tamin’ny 1918. Tsy nisy lanjany mihitsy ny vola alemà tamin’ny 1923. Nitotongana ny toe-karena eran-tany, enin-taona tatỳ aoriana. Nanomboka koa ny Ady Lehibe II tamin’ny 1939, izay azo lazaina hoe tohin’ny Ady Lehibe I ihany. Iza no rangory fototry ny afo tamin’ireny loza nisesisesy ireny?
FAMANTARANA NY ANDRO FARANY
Ny faminanian’ny Baiboly dia manampy antsika hamantatra ny anton’ny zava-mitranga sasany, anisan’izany ny Ady Lehibe I. Nilaza i Jesosy fa “hisy firenena hitsangana hamely firenena”, ary hamely eran-tany ny mosary sy ny areti-mandringana. (Matio 24:3, 7; Lioka 21:10, 11) Nilaza tamin’ny mpianany izy fa ho famantarana ny andro farany ireo loza ireo. Hita amin’ny tsipiriany hafa voalaza ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy koa fa mifandray amin’ny loza etỳ an-tany ny ady iray tany an-danitra.—Jereo ilay efajoro hoe “Ady Teto An-tany sy Ady Tany An-danitra.”
Miresaka mpitaingin-tsoavaly efatra ny bokin’ny Apokalypsy. Ny telo aminy dia mifandray amin’ireo loza noresahin’i Jesosy momba ny ady sy mosary ary areti-mandringana. (Jereo ilay efajoro hoe “Efa Mihazakazaka ve Ireo Soavaly Efatra?”) Hita hoe niteraka fijaliana nitohitohy ny Ady Lehibe I. Lazain’ny Baiboly fa i Satana no rangory fototry ny afo tamin’izany. (1 Jaona 5:19) Hisy farany ihany ve izany?
Milaza ny Baiboly hoe “fohy ny fotoana” ananan’i Satana. (Apokalypsy 12:12) Tezitra mafy àry izy ka mahatonga loza tsy misy toa azy eto an-tany. Porofoin’ireny loza ireny koa fa efa ho tapitra ny fotoana ananan’i Satana.
HORAVANA NY ASAN’NY DEVOLY
Niteraka fiovana be teo amin’ny tantara ny Ady Lehibe I. Iny mantsy no ady maneran-tany voalohany. Nampipoitra tolom-bahoaka tany amin’ny firenena maro koa izy iny, ary nahatonga ny olona tsy hatoky ny mpitondra intsony. Nanaporofo koa izy iny hoe noroahina avy tany an-danitra i Satana. (Apokalypsy 12:9) Toy ny mpitondra tsy refesi-mandidy io mpitondra tsy hita maso io, ary fantany tsara fa kely sisa ny fotoana ananany. Tsy hisy intsony ny fahoriana nentin’ny Ady Lehibe I rehefa tapitra io fotoana io.
Afaka matoky àry ianao, noho ireo faminaniana ao amin’ny Baiboly, fa “handrava ny asan’ny Devoly” i Jesosy Kristy, ilay Mpanjaka any an-danitra. (1 Jaona 3:8) Olona an-tapitrisany no mivavaka mba ho tonga ny Fanjakan’Andriamanitra. Anisan’izany ve ianao? Ny sitrapon’Andriamanitra, fa tsy ny an’i Satana, no hotanterahin’io Fanjakana io eto an-tany, ary hahita izany ireo olona tsy mivadika. (Matio 6:9, 10) Tsy hisy ady lehibe na ady hafa intsony amin’izay. (Salamo 46:9) Fantaro àry ny momba an’io Fanjakana io, dia hahita ny fotoana hanjakan’ny fiadanana eto an-tany ianao!—Isaia 9:6, 7.
Ady Teto An-tany sy Ady Tany An-danitra
Natolotr’i Satana an’i Jesosy ny “fanjakana rehetra eo amin’izao tontolo izao”, 1 900 taona teo ho eo talohan’ny nanombohan’ny Ady Lehibe I. (Matio 4:8, 9) Nanohitra an’io fakam-panahy io i Jesosy. Nilaza izy tatỳ aoriana fa “mpitondra an’izao tontolo izao” ny Devoly. (Jaona 14:30) Nanoratra koa ny apostoly Jaona fa ‘eo ambany fahefan’ilay ratsy izao tontolo izao manontolo.’—1 Jaona 5:19.
Raha manana fahefana be eo amin’izao tontolo izao i Satana Devoly, tsy ho ara-dalàna ve ny hilazana fa anisan’ny nahatonga ny Ady Lehibe I sy ny vokatr’izy io izy? Milaza mihitsy aza ny bokin’ny Apokalypsy fa i Satana no nahatonga ny loza rehetra nanomboka tamin’ny 1914. Ireto ny zava-misy sasany resahin’ny Apokalypsy toko faha-12:
Andininy 7 Nisy ady nipoaka tany an-danitra: I Mikaela (Jesosy Kristy) niady tamin’ilay dragona (Satana).
Andininy 9 Natsipy tetỳ an-tany ny Devoly, “izay mamitaka ny tany rehetra misy mponina.”
Andininy 12 “Loza ho an’ny tany sy ny ranomasina, fa nidina any aminareo ny Devoly sady tezitra mafy, satria fantany fa fohy ny fotoana ananany.”
Ny famaritan’ny Baiboly an’ireo daty manan-tantara sy ny zava-misy, dia samy manaporofo fa nitranga tamin’ny 1914 io ady tany an-danitra io, rehefa tafaorina ny Fanjakan’Andriamanitra. * Samy nanomboka tamin’io taona io àry na ilay ady teto an-tany na ilay tany an-danitra.
^ feh. 20 Jereo ny toko 8 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Efa Mihazakazaka ve Ireo Soavaly Efatra?
Soavaly fotsy: Mpanjaka iray any an-danitra no mitaingina azy. I Jesosy Kristy Mpanjaka no mitaingina azy io mba hampitoerana ny fahitsiana. (Salamo 45:4) Ny nandroaka an’i Satana sy ireo demonia avy tany an-danitra no asany voalohany.—Apokalypsy 6:2; 12:9.
Soavaly mena: Nomena fahefana “hanaisotra ny fandriampahalemana amin’ny tany” ilay mitaingina azy io. (Apokalypsy 6:4) Nisy ady foana teto an-tany nanomboka tamin’ny 1914. Nipoaka ny Ady Lehibe II, 21 taona taorian’ny nahavitan’ny Ady Lehibe I, ary namono olona maro lavitra. Voalaza fa 60 tapitrisa teo ho eo no maty tamin’izy io. Vitsy kokoa ny tany niady taorian’ny 1945, saingy nahery vaika ihany ireny ady ireny. Nisy mpahay tantara nilaza fa maherin’ny 100 tapitrisa no maty an’ady tamin’ny taonjato faha-20.
Soavaly mainty: Manana mizana eny an-tanany ilay mitaingina azy io ary midika ho mosary izany. (Apokalypsy 6:5, 6) Tsy navelan’ny Tafika Mpiray Dina ho any Alemaina ny sambo mpitondra sakafo tamin’ny Ady Lehibe I, ka 750 000 teo ho eo no maty mosary. Rosianina roa tapitrisa mahery no maty mosary tamin’ny 1921, ary nisy hoatr’izany koa tany an-tany hafa. Olona 70 tapitrisa teo ho eo no maty mosary tamin’ny taonjato faha-20. Telo tapitrisa mahery koa ny zaza latsaka ny dimy taona maty isan-taona satria tsy ampy sakafo.
Soavaly hatsatra: Mahatonga areti-mandringana ilay mitaingina azy io (Apokalypsy 6:8) Ny gripa espaniola no aretina nandripaka voalohany, tamin’ny taonjato faha-20. Nisy nilaza fa olona 50 tapitrisa teo ho eo no matin’izy io. Hoy ny boky Olona sy Mikraoba (anglisy): “Iny areti-mandringana iny no ratsy indrindra teo amin’ny tantara. . . . Na ny pesta aza tsy nahafaty olona be dia be tao anatin’ny fotoana fohy toy iny.” Nahafaty olona an-jatony tapitrisa koa ny nendra sy ny tazo ary ny tioberkilaozy, nandritra ny taonjato faha-20.
Hizara Hizara Ilay Tena Rangory Fototry ny Afo